Xiaomi နှင့် Poco ဖုန်းများကို ကန့်သတ်အချိန်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်လျှော့စျေးများ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Ignatius ခန်းမ | 14/01/2022 23:30 | အဆင့်မြှင့်တင် 15/01/2022 09:57 | အန်းဒရွိုက်
ဇန်န၀ါရီလ ရောင်းအားက ဒီကို ရောက်နေပြီ။ ခရစ္စမတ် စျေးဝယ်နှင့် စားသောက်မှု လွန်ကဲပြီးနောက်၊ သင်၏ခါးပတ်ကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် တင်းကျပ်ရန် အချိန်ရောက်လာပြီ။ သင်စဉ်းစားနေလျှင် သင့်မိုဘိုင်းလ်အဟောင်းကို သက်တမ်းတိုးလိုက်ပါ။အချိန်တွေကုန်နေလို့၊ မင်း မှန်ကန်တဲ့ ဆောင်းပါးကို ရောက်လာပြီ။
သင်မှန်လျှင် စျေးနှုန်းသင့်တင့်သော Xiaomi ကို ရှာဖွေနေပါသည်။Poco M3 Pro သို့မဟုတ် Android တက်ဘလက်တစ်လုံးကို ဝယ်ယူလိုပါက၊ ဤဆောင်းပါးတွင် စပိန်နိုင်ငံမှ ပို့ဆောင်မှုဖြင့် AliExpress တွင် အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် ရနိုင်သော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကမ်းလှမ်းမှုများ စီးရီးများကို ဖော်ပြထားပါသည်။
စက်အားလုံးရှိသည်။ တရားဝင်အာမခံ2နှစ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပြန်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် 15 ရက်အထိရှိသည်။ ပြanyနာမရှိဘဲ။
1 Xiaomi Mi 11 Lite 5G ကို ၃၃၈.၉၉ ယူရို + လက်ဆောင်
2 Xiaomi Mi Pad5ကို ယူရို ၃၃၇.၉၉ မှ
3 Little M3 Pro 5G ကို 156,99 ယူရိုမှ
Xiaomi Mi 11 Lite 5G ကို ၃၃၈.၉၉ ယူရို + လက်ဆောင်
သင့်တွင်အနည်းငယ်ပိုသောဘတ်ဂျက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်းရှိအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည့် Xiaomi Mi 11 Lite 5G မော်ဒယ်အပြင်၊ 12% လျှော့စျေး၊ Mi TV Box ပါဝင်ပါသည်။
Xiaomi Mi 11 Lite 5G က စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ 778G နည်းပညာဖြင့် 5G ပရိုဆက်ဆာရရှိနိုင်သောကမ်းလှမ်းချက်တွင်ပါရှိသောပရိုဆက်ဆာ 8 GB RAM အမျိုးအစား LPDDR4X နှင့် 128 GB Internal Storage TYPE UFS 2.2.
မျက်နှာပြင်အကြောင်းပြောရင်၊ အရွယ်အစားတစ်ခုအကြောင်း ပြောရမယ်။ 6,55 လက်မ FullHD+ ရုပ်ထွက်နှင့် 90 Hz refresh rate ပါ. ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွင်းတွင် ရိုးရာ Xiaomi စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအလွှာဖြင့် Android 11 ကို တွေ့ရှိရသည်။
ဘက်ထရီက 4.250 mAh ရှိပြီး 33W အမြန်အားသွင်းစနစ်ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။. ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ တွေ့ရတယ်။ ကင်မရာသုံးလုံး:
60 MP ပင်မကင်မရာသည် f/1.7 aperture ပါ၀င်သည်။
8MP Ultra Wide Angle ကင်မရာသည် မြင်ကွင်းထောင့် 119 ဒီဂရီဖြစ်သည်။
5 မှ3စင်တီမီတာအတွင်း အော်တိုဆုံမှတ်ပါရှိသော7MP Macro Camera
La Xiaomi Mi 11 Lite 5G အရှေ့ကင်မရာ 20 MP သို့ရောက်ရှိ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အံ့ဖွယ်လက်ဆောင်တစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ငါပြောနေတာက Xiaomi Mi TV Box Sကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ TV ပေါ်ရှိ ဗီဒီယိုပလပ်ဖောင်းများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပြီး လိုက်ဖက်ညီသော ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောဂိမ်းများကို ခံစားနိုင်သည့် Android TV မှ စီမံခန့်ခွဲသည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။
NFC ချစ်ပ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ နေ့စဥ်ဝယ်ယူမှုများအတွက် ငွေပေးချေရန်၊ စပီကာနှစ်လုံး၊ လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာ၊ terminal အပူလွန်ကဲခြင်းမှ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို အပူပေးသည့်စနစ်။
Xiaomi Mi TV Box မှာ တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ 4K ရုပ်ထွက်နှင့် HDMI အထွက်အကြောင်းအရာ ၎င်းကို ARM CorteX-A53၊ Mali-450 GPU ဂရပ်ဖစ်၊2GB RAM နှင့် 8 GB သိုလှောင်မှုဖြင့် စီမံထားသည်။
အတွက်လည်း slot တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ eMMC ကတ်များကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာတွင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုလိုပါကထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစားကိုချိတ်ဆက်ရန် Bluetooth 4.2 ကိုအသုံးပြုပါ။
Xiaomi Mi 11 Lite 5G ၏ ပုံမှန်စျေးနှုန်းမှာ ယူရို ၃၉၉ ဖြစ်သည်။
ကူပွန်နှင့်အတူ နောက်ဆုံးစျေးနှုန်း- 338,99 ယူရို။
Xiaomi Mi 11 Lite 5G ကို ယူရို ၃၃၈.၉၉ ဖြင့် ဝယ်ယူပါ။
Xiaomi Mi 11 Lite 5G ၏ကမ်းလှမ်းမှုသည် ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။ 867 ပထမအဝယ်။
Xiaomi Mi Pad5ကို ယူရို ၃၃၇.၉၉ မှ
Android စျေးကွက်တွင် လက်ရှိရှာဖွေနိုင်သည့် အကောင်းဆုံး တက်ဘလက်များထဲမှ တစ်ခုသည် အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် ရှာဖွေနိုင်သည့် Xiaomi Mi Pad5၊ 12% လျှော့စျေး။
Xiaomi Mi Pad5မှာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 2560 × 1600 pixels၊ စတီရီယိုစပီကာများ၊ Android 11 နှင့် stylus တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပိုကြီးတဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ Android မှာရနိုင်တဲ့ အစွမ်းထက်ဆုံးဂိမ်းတွေကို ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပရိုဆက်ဆာအတွင်းပိုင်းမှာ Xiaomi ရဲ့ Mi Pad5နဲ့ ဘာပြဿနာမှ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Qualcomm ၏ Snapdragon 860
Snapdragon 860 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့သည်။ 6GB RAM အမျိုးအစား LPTDDR4. သိုလှောင်မှုအတွက်၊ ဤမော်ဒယ်ကို သိုလှောင်မှုဗားရှင်း နှစ်မျိုးဖြင့် ရနိုင်သည်- 128 နှင့် 256 GB။
ကင်မရာအကြောင်းပြောရင် ကင်မရာအကြောင်းပြောရမယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာ 13 MP နှင့် 8 MP တို့ပါဝင်သည်။ ရှေ့ခန်းမှာ တွေ့တာ။
ဘက်ထရီရောက်ရှိနေပြီ 8720 mAh နှင့် 33W အမြန်အားသွင်းစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ ၎င်းကို ၂ နာရီကျော်အတွင်း အားသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အလွန်သေးငယ်သော နယ်နိမိတ်များနှင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Apple ရဲ့ iPad Pro ကို အများကြီး သတိရစေပါတယ်။အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Android တက်ဘလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိပါသည်။
Mi Pad5၏ပုံမှန်စျေးနှုန်း 6G RAM + 128GB ပါဝင်ပါတယ်။: 399,99 ယူရို။
Mi Pad5၏ပုံမှန်စျေးနှုန်း 6GB RAM + 256GB ပါဝင်ပါတယ်။: 449,99 ယူရို။
ကူပွန်နှင့်အတူ နောက်ဆုံးစျေးနှုန်း- 381,99 ယူရို။
Xiaomi Mi Pad ကို ယူရို ၃၃၇ မှ ဝယ်ယူပါ။
Xiaomi Mi Pad ၏ ကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်း၏ဗားရှင်းများတွင်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။ ပထမဆုံးဝယ်ယူမှု ၁၀၀၀.
Little M3 Pro 5G ကို 156,99 ယူရိုမှ
မိုဘိုင်းဖုန်းရှာနေတယ်ဆိုရင် စျေးသက်သာပြီး လှတယ်၊ စျေးကွက်တွင် 3G ကွန်ရက်များနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် Poco M5 Pro ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမရှိပါ။ ဤ terminal ကိုရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးတွင် 10% လျှော့စျေးဖြင့် ဤစက်ပစ္စည်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Poco M3 Pro 5G မှာ ပါရှိပါတယ်။ မျက်နှာပြင် 6,5 လက်မရှိပြီး FullHD+ ရုပ်ထွက်နှင့် 90 Hz refresh rate ရှိသည်။Corning Gorilla Glass ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
အထဲမှာ 5G ပရိုဆက်ဆာပါ။ MediaTek Dimensity 700 သည် 8 GHz တွင် 2.2 cores ပါရှိသည်။ Poco M3 Pro ကို RAM4GB နှင့် သိုလှောင်မှု 64 GB နှင့် ဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ RAM6GB နှင့် သိုလှောင်မှု 128 GB တို့ဖြစ်သည်။
ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ တွေ့ရတယ်။ ကင်မရာ ၃ လုံး
48MP ပင်မကင်မရာသည် အလင်းဝင်ပေါက် f/1.7 ဖြစ်သည်။
2 MP Macro ကင်မရာ
ပုံတူများတွင် နောက်ခံမှုန်ဝါးစေရန်2MP အတိမ်အနက် အာရုံခံကိရိယာ။
La ရှေ့ကင်မရာ 8MP ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးနှင့်အတူ 5.000 mAh ဘက်ထရီမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေအကြောင်းပြောရင် စျေးကွက်မှာ အကြီးဆုံးဘက်ထရီတွေထဲက တစ်ခုကို ရှာတွေ့မှာပါ။ အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ထာဝရမတည်မြဲစေရန်အတွက် Poco M3 Pro ၏ ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ 18W အမြန်အားသွင်းစနစ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။.
NFC ချစ်ပ်များ ပါဝင်သည်။ မိုဘိုင်း၊ နားကြပ်ပေါက်၊ bluetooth 5.1၊ မျက်နှာနှင့် လက်ဗွေ မှတ်သားမှု အာရုံခံ ကိရိယာ နှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည် ထုတ်လွှတ်မှုတို့မှ ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ရန်။
Poco M3 Pro 5G ၏ ပုံမှန်စျေးနှုန်း 4G+64GB ဖြစ်ပါတယ်။: 179,99 ယူရို။
ကူပွန်နှင့်အတူ နောက်ဆုံးစျေးနှုန်း- 156,99 ယူရို။
Poco M3 Pro 5G ၏ ပုံမှန်စျေးနှုန်း 6GB+128GB ဖြစ်ပါတယ်။: 199,99 ယူရို။
ကူပွန်နှင့်အတူ နောက်ဆုံးစျေးနှုန်း- 176,99 ယူရို။
Poco M3 Pro 5G ကို 156,99 ယူရိုမှ ဝယ်ယူပါ။
၎င်း၏ဗားရှင်းများတွင် Poco M3 Pro ၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ပထမဆုံးဝယ်ယူမှု ၁၀၀၀.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » အန်းဒရွိုက် » Xiaomi နှင့် Poco မိုဘိုင်းလ်များအတွက် စိတ်ဝင်တစား လျှော့စျေးများကို အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်း
သင်၏တင်ဆက်မှုများအတွက် အကောင်းဆုံး Prezi နမူနာများ